ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ဦးနှောကျ နဲ့ နှလုံးသား – Kyaw Zaw Oo's Blog
April 7, 2019 April 7, 2019 kyaw zaw oo
ငွိမျးခမျြးရေးအတှကျ ဦးနှောကျ နဲ့ နှလုံးသား
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဦးနှောက် နဲ့ နှလုံးသား
NCA လမ်းကြောင်းကနေ ကိုယ့်ဖက်သူ့ဖက် လိုချင်တဲ့ပုံစံဝင်လာအောင် ပုံဖော်ဖို့ ကြိုးစားကြတာ၊ ဒါမှမဟုတ် စားပွဲမှာလာထိုင်ပြီး ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ် လိုချင်သယောင် သရုပ်ဆောင်ပြကြတာ၊ ဒါမှမဟုတ် မြေပြင်မှာ လက်နက်ကိုင်ပြီးတော့ ကိုယ့်ဖက်အကျအဆုံး နည်းပြီးတော့ သူဖက်အကျအဆုံးများအောင် လုပ်ကြတာ၊ ကိုယ်စိုးမိုးတဲ့ နယ်မြေကျယ်သထက်ကျယ်အောင် လုပ်ကြတာ၊ ‘ငြိမ်းချမ်းရေး’ ဆိုတာကို လိုချင်ရင် ငါ့ဆီမှာ လာဒူးထောက် လို့ ပြောတာ၊ ဒူးမထောက်တဲ့သူတွေဟာ ‘ငြိမ်းချမ်းရေး’ ဆိုတာကို ဖျက်ဆီးသူတွေလို့ ၀ါဒဖြန့်တာ၊ အင်အားရှိနေတယ်လို့ထင်ရင် စကားတစ်မျိုးပြောတာ၊ မနိုင်တော့ဘူးထင်ရင် နောက်တစ်မျိုးပြင်ပြောတာ . . . ဒါတွေအားလုံးဟာ ပဓာနအားဖြင့် ဦးနှောက်က (တစ်နည်းအားဖြင့် ဦးခေါင်းက) ဦးဆောင် တွက်ချက်လုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေးကို အမှန်တကယ် ရရှိနိုင်ကြဖို့ရာ ဦးနှောက် တစ်ခုတည်းကသာမဟုတ်၊ နှလုံးသားမှာ ဘာတွေ မှားယွင်းစွာ ခံယူထားကြသလဲ ဆိုတာကို ရှာဖွေစစ်ဆေးပြီး အမှန်တကယ်ပြန်လည်ပြင်ဆင် ကုစားပြီးတဲ့အခါကျမှ အစစ်အမှန် ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေး ရေရှည်တည်မြဲတဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ရနိုင်ပြီးတော့ သာယာဝပြော အားကောင်းစည်ပင်တဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ အတူနေနိုင်ကြတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ ပြည်ထောင်စုကြီး တည်ဆောက်နိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တရုတ်က အနိုင်ကျင့်တယ် ကုလားကိုမုန်းတယ် စသည်အားဖြင့် ဘာတွေညာတွေ လျှောက်ပြောနေစရာမလိုဘဲ ပြဿနာတွေကို အိနြေ္ဒရရ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အားကောင်းတဲ့ နိုင်ငံ ဖြစ်လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာ့တပ်မတော် နဲ့ တကွ တပ်မတော် ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ သဘောထားကိုတော့ စကားထဲကို ထည့်မပြောတော့ပါဘူး။ ပြည်မနေလူများစုက အားကိုးကြတဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာတောင်မှ ရုပ်ဆိုးမှားယွင်းတာတွေ ဘာတွေ ရှိနေသလဲ ကျွန်တော်တို့ လှမ်းမြင်နေရပါတယ်။ သမိုင်းအမှားတွေ တွေးခေါ်မြော်မြင်မှုအခြေခံအမှားတွေနဲ့ အသားကျနေတဲ့ သာမန်ပြည်သူတွေဆိုရင် ဒီထက်အများကြီး ပိုဆိုးတယ် ဆိုတာကတော့ ပြောနေစရာတောင် မလိုပါဘူး။
ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဦးနှောက်နဲ့သာမက ပြောင်းလဲသန့်စင်သော နှလုံးသားနဲ့ပါ တည်ဆောက်ကြမှ ရနိုင်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ လေးရက် ဧပြီလ (၃) ရက်နေ့က ကုလသမဂ္ဂ ရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးသတင်းစကားသယ်ဆောင်သူ (UN Messenger of Peace) ဖြစ်သူ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး ချင်ပန်ဇီ ကျွမ်းကျင်သူပညာရှင် – ဆရာမကြီး Jane Goodall အသက် (၈၅ ) နှစ် ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်မတို့လူသားတွေတို့ အမှန်တကယ် ရထိုက်တဲ့ အစစ်အမှန် အနာဂတ်ကို ရရှိအောင်မြင်နိုင်ဖို့ရာကတော့ – ဦးနှောက်နဲ့ နှလုံးသားတို့က လက်တွဲညီညီ လုပ်ဆောင်ကြတဲ့အခါမှသာ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် “We will only achieve our true human potential when head and heart work in harmony.” လို့ Jane Goodall က ဆိုပါတယ်။
၂၀၁၉ ဧပြီလ (၇) ရက်
ဗီဒီယိုကြာမြင့်ချိန် – တစ်မိနစ် သုံးစက္ကန့်
NCA လမျးကွောငျးကနေ ကိုယျ့ဖကျသူ့ဖကျ လိုခငျြတဲ့ပုံစံဝငျလာအောငျ ပုံဖျောဖို့ ကွိုးစားကွတာ၊ ဒါမှမဟုတျ စားပှဲမှာလာထိုငျပွီး ငွိမျးခမျြးရေးကို အမှနျတကယျ လိုခငျြသယောငျ သရုပျဆောငျပွကွတာ၊ ဒါမှမဟုတျ မွပွေငျမှာ လကျနကျကိုငျပွီးတော့ ကိုယျ့ဖကျအကအြဆုံး နညျးပွီးတော့ သူဖကျအကအြဆုံးမြားအောငျ လုပျကွတာ၊ ကိုယျစိုးမိုးတဲ့ နယျမွကေယျြသထကျကယျြအောငျ လုပျကွတာ၊ ‘ငွိမျးခမျြးရေး’ ဆိုတာကို လိုခငျြရငျ ငါ့ဆီမှာ လာဒူးထောကျ လို့ ပွောတာ၊ ဒူးမထောကျတဲ့သူတှဟော ‘ငွိမျးခမျြးရေး’ ဆိုတာကို ဖကျြဆီးသူတှလေို့ ၀ါဒဖွနျ့တာ၊ အငျအားရှိနတေယျလို့ထငျရငျ စကားတဈမြိုးပွောတာ၊ မနိုငျတော့ဘူးထငျရငျ နောကျတဈမြိုးပွငျပွောတာ . . . ဒါတှအေားလုံးဟာ ပဓာနအားဖွငျ့ ဦးနှောကျက (တဈနညျးအားဖွငျ့ ဦးခေါငျးက) ဦးဆောငျ တှကျခကျြလုပျဆောငျတာဖွဈပါတယျ။
ငွိမျးခမျြးရေးကို အမှနျတကယျ ရရှိနိုငျကွဖို့ရာ ဦးနှောကျ တဈခုတညျးကသာမဟုတျ၊ နှလုံးသားမှာ ဘာတှေ မှားယှငျးစှာ ခံယူထားကွသလဲ ဆိုတာကို ရှာဖှစေဈဆေးပွီး အမှနျတကယျပွနျလညျပွငျဆငျ ကုစားပွီးတဲ့အခါကမြှ အစဈအမှနျ ထာဝရငွိမျးခမျြးရေး ရရှေညျတညျမွဲတဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးကို ရနိုငျပွီးတော့ သာယာဝပွော အားကောငျးစညျပငျတဲ့ ပြျောရှငျစှာ အတူနနေိုငျကွတဲ့ စဈမှနျတဲ့ ပွညျထောငျစုကွီး တညျဆောကျနိုငျကွမှာ ဖွဈပါတယျ။ တရုတျက အနိုငျကငျြ့တယျ ကုလားကိုမုနျးတယျ စသညျအားဖွငျ့ ဘာတှညောတှေ လြှောကျပွောနစေရာမလိုဘဲ ပွဿနာတှကေို အိန်ဒွရေရ ဖွရှေငျးနိုငျတဲ့ အားကောငျးတဲ့ နိုငျငံ ဖွဈလာမှာ ဖွဈပါတယျ။
မွနျမာ့တပျမတျော နဲ့ တကှ တပျမတျော ခေါငျးဆောငျတှရေဲ့ သဘောထားကိုတော့ စကားထဲကို ထညျ့မပွောတော့ပါဘူး။ ပွညျမနလေူမြားစုက အားကိုးကွတဲ့ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျရဲ့ နှလုံးသားထဲမှာတောငျမှ ရုပျဆိုးမှားယှငျးတာတှေ ဘာတှေ ရှိနသေလဲ ကြှနျတျောတို့ လှမျးမွငျနရေပါတယျ။ သမိုငျးအမှားတှေ တှေးချေါမွျောမွငျမှုအခွခေံအမှားတှနေဲ့ အသားကနြတေဲ့ သာမနျပွညျသူတှဆေိုရငျ ဒီထကျအမြားကွီး ပိုဆိုးတယျ ဆိုတာကတော့ ပွောနစေရာတောငျ မလိုပါဘူး။
ငွိမျးခမျြးရေးကို ဦးနှောကျနဲ့သာမက ပွောငျးလဲသနျ့စငျသော နှလုံးသားနဲ့ပါ တညျဆောကျကွမှ ရနိုငျကွမှာ ဖွဈပါတယျ။
ပွီးခဲ့တဲ့ လေးရကျ ဧပွီလ (၃) ရကျနကေ့ ကုလသမဂ်ဂ ရဲ့ ငွိမျးခမျြးရေးသတငျးစကားသယျဆောငျသူ (UN Messenger of Peace) ဖွဈသူ ကမ်ဘာ့ပထမဆုံး ခငျြပနျဇီ ကြှမျးကငျြသူပညာရှငျ – ဆရာမကွီး Jane Goodall အသကျ (၈၅ ) နှဈ ပွညျ့မွောကျခဲ့ပါတယျ။
ကြှနျမတို့လူသားတှတေို့ အမှနျတကယျ ရထိုကျတဲ့ အစဈအမှနျ အနာဂတျကို ရရှိအောငျမွငျနိုငျဖို့ရာကတော့ – ဦးနှောကျနဲ့ နှလုံးသားတို့က လကျတှဲညီညီ လုပျဆောငျကွတဲ့အခါမှသာ ဖွဈပါလိမျ့မယျ “We will only achieve our true human potential when head and heart work in harmony.” လို့ Jane Goodall က ဆိုပါတယျ။
၂၀၁၉ ဧပွီလ (၇) ရကျ
ဗီဒီယိုကွာမွငျ့ခြိနျ – တဈမိနဈ သုံးစက်ကနျ့
Previous ငါတို့သညျ ကွီးကယျြမွငျ့မွတျသူမြား ဖွဈတျောမူကွကုနျ၏
Next ပနျးပုဆရာကောငျးမြား နှလုံးသားလညျး လှရနျလို